Amafulegi Russian. Yini ifulegi Russian?
Amafulegi Ziyathakazelisa, nakuba hhayi ngempela anomlando omude. Izibhengezo futhi amafulegi, ngawo amasosha aya empini endulo, ukufeza le ndima, ngaphambi kokuba ifulege Russian. Ake ubone ngeso lengqondo manje uyazi zonke umfundi. Uyini umlando umlingisi isiRashiya, lokho imibala ziyafana kakhulu kuyo, futhi nalokho ekumelelayo, kuchazwa esihlokweni.
Ngamunye isimo iplanethi has izimpawu ayo ukuthi ukuhlukanisa izwe elilodwa ukusuka kwenye. Phakathi kwabo kukhona amafulegi namaculo nezimfanelo eyinhloko wekuba sive. Zonke imibala kanye izakhi awayona okungahleliwe, kodwa anencazelo ekhethekile, okuyinto imelela okuthile okunenjongo, exhunywe ne umlando ezweni. Ngezinye izikhathi abantu ngeke bahlale bazi ngekhanda zonke imininingwane liculo lesive futsi elingenamikhono izingalo isimo. Nokho, ifulege, ngaphandle kokungabaza, wonke umuntu uyazi.
Amafulegi lokuqala, eqinisweni, wabonakala, nakuba ebizwa ngamagama ehlukene, ngemva kweminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezintathu edlule. Ngokwesibonelo, uGenghis Khan senziwa ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi kwezinga ichopho Ponytail umkhonto.
Namuhla, ifulegi isimo kukhona izinhlobo ezahlukene indwangu isithombe kwezimpawu, izifanekiselo, izithombe, izibopho.
Imikhumbi asolwandle yezwe kungenzeka okufanayo njengoba iflarha lombuso, futhi ingase ihluke kuye ngokuphelele. Kukhona ifulege yomthengisi lasolwandle, noma ngamanye amazwi, ifulegi kwezohwebo. Posted on the emkhunjini, bona demonstiruyut ubuzwe.
Ekujuleni eminyaka yomlando Russian
Ezikhathini zasendulo, ngisho kobuKrestu ekuqaleni kwenkathi yobuKristu, njengoba amafulegi babe impi amafulegi kanye amabhanela. Esikhathini "Beka" uchaza amabhanela elibomvu futhi "bang", kanye amabhanela emhlophe. Kuyaziwa ukuthi ngesikhathi Battle of Kulikov banner main kwaba indwangu emnyama-bomvu womfekethisi ubuso uMsindisi. Naye njengoba Ivan Grozny ngekhulu leshumi nesithupha wenza umkhankaso wakhe wokulwa Kazan.
Khangisa musketeer ibutho ngaphambi, phakathi nangemva wokubusa uPeter Omkhulu, nabo bebekhona obomvu, noma nge shades yakhe.
Njengoba baziwa kakhulu "banner olukhulu" Ivana Groznogo, lapho phakathi kwaba -azure, emthambekeni - omhlophe, umngcele - cranberry, futhi indawo ezungeze emthambekeni - poppy imibala. Phakathi khona-azure indingilizi eluhlaza ezifekethisiwe lapho ihhashi elimhlophe futhi begqoke ezimhlophe lwalunguMsindisi. Ngezansi umbuthano ohlangothini lwesobunxele yilona ibandla lasezulwini. Emthambekeni lase futhi ithungwe umbuthano elimhlophe lapho kwakukhona Uyingelosi Enkulu UMikayeli phezu Pegasus segolide. Kokunye esandleni sakhe - inkemba kwesinye - esiphambanweni. Lonke emthambekeni ugcwele izinkanyezi iziphambano.
Eyokuqala ifulege of the Empire, Russian
Amafulegi ngesimo lapho esiwaziyo namuhla, zavela Europe ekuqa- namakhulu eminyaka nesithupha-nesikhombisa. Isidingo nesenzakalo yabo kwabangelwa ukubukeka ngoxhaxha. Amafulegi okubonisa imikhumbi fanele kuze lo noma ukuthi isimo. Nokho, ubuntu bakhe main ngesikhathi wayesalokhu elingenamikhono izingalo.
Ngo 1634, i-inkosi yokuqala Romanov lwamakhosi, Mikhail Fedorovich wafika lenxusa ngu Duke Frederick III. Labe banquma ukwakha imikhumbi eziyishumi iVolga okuhambela yasePheresiya. Futhi lapha, amanzi e 1636 wethulwa Omkhulu womkhumbi wokuqala ngaphansi kwegama "Frederick". Akazange isikhathi eside, kodwa kwaba ngaphansi ifulege, njengesiphambano Russian tricolor zamanje. Noma kunjalo, wathola isimo esemthethweni kamuva.
Ukwakheka isimo ifulege Russian
Ngo 1668, umkhumbi Yakhiwa, ngokuthi "Lokhozi". Ngonyaka owawandulele, induna umkhumbi watshela inkosi ukuthi umkhumbi kuyadingeka ukwenza ifulege, njengoba kwenziwa imikhumbi kwamanye amazwe. Tsar Alexei Mikhailovich okulungiselelwe "womBhalo izimpawu zachinanii nezibhengezo noma Ensign", esinikela izithombe kweBhayibheli nambili zakwa-Israyeli kanye amafulegi ayekhona ngaleso sikhathi amandla zasolwandle. Kuyaziwa ukuthi ekugcineni eyathungwa tricolor izindwangu, okumhlophe nokuluhlaza, imibala yeNetherlands ifulege, kodwa indlela - ayikaziwa. Wagcina ubufakazi kuphela ukuthi tricolor kwakufanele abe umfanekiso ezinkozi.
Ngo 1693 inkosi ezahlukene - Peter mina, ehamba yacht ngezibhamu nambili "Saint Peter" waphakamisa "inkosi ifulege eMoscow", ehlanganisa imichilo efanayo imibala white, blue and abomvu, ngegolide ukhozi kabili ephethwe phakathi. yasekuqaleni wakhe balondolozwa kuze kube yilolu suku. It kungabonakala Museum Petersburg.
UPetru wayengagunci, ebhodini, kanye nezinye amafulegi. Nokho, abazange like kuye, ukuthi, ngokusobala, bekulindeleke ukuthi uthando lwakhe ngoMniki-Netherlands. Lapho efika e Rotterdam uPetru mina wayelindele frigate. Ngezinye esikebheni safakwa ifulege Dutch, okuyinto wammangaza kakhulu inkosi babenqume ukungahambi ukuyiguqula ngaphezulu.
Ngaphezu "iNkosi umkhosi eMoscow, 'uPetru, kulandela ngokwezifiso European, uSathane wasungula nezinye amafulegi eziningi. Lezi zihlanganisa asolwandle Andrew, omhlophe, ukuyothenga blue and red nokunye.
Nokho, umlingisi ingemukelwa isimo esemthethweni. Kodwa ngo-1883, yamemezela kusengaphambili tricolor Russian kazwelonke noma ethandwa, futhi sivunyiwe ngo-1896 lapho uNicholas II njengoba ifulege of the Empire, Russian futhi kwaba kanjalo iminyaka engamashumi amathathu nane.
Ifulegi Romanov lwamakhosi
Ngo 1858, u-Alexander II ngemvume isimemezelo eziphoqelelwe black-yellow-mhlophe "isitembu" ifulege. It isekelwe esikweni lethu heraldic, lapho umbala omnyama ethathwa ukhozi ezimbili abangenangqondo, ophuzi - endle igolide isibonakaliso, futhi white umbala St George. Ngaphezu kwalokho, imibala amelela umhlaba, igolide nesiliva. Emhlophe-oluhlaza-obomvu tricolor umkhosi ke kwezohwebo.
Iminyaka lishumi Engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye, izazi-mlando eziye babephikisana ngokuthi yini okufanele ifulegi Empire Russian. I pro-Western nezazi Russian wazizwa ngothando olufudumele tricolor emhlophe-oluhlaza-obomvu, futhi lokho okubizwa ngokuthi Russophile afune ukuqashelwa-black ophuzi-mhlophe. Izazimlando ziye wagomela ukuthi tricolor umbala omhlophe, blue and red Alubekiwe inhlabathi Russian. Nokho, lezi zimpikiswano azisuswanga. Liberal wagxeka ifulege Russian kazwelonke uhlamvu yayo monarchical futhi ukufana German oyedwa engenhla band olulodwa.
Lapho ubuka le mpikiswano ngemva kweminyaka engaphezu kweyikhulu, kuyacaca ukuthi ongqondongqondo kwesokunxele-ovulekile wabanjwa lapho French imfiva izinguquko kanye wafuna ukwenza Russia ngaphansi nezindinganiso ze-European.
Alexander III isikhathi eside akazange alinge ngenxa isikhundla salo Russophile, kodwa ngo-1883 wagcina ngaphambilini ukusetshenziswa tricolor, nakuba black-yellow-white okungazange kukhanselwe ngokuphelele.
Kunobufakazi bokuthi uNicholas II wafuna ukubuyisela ifulege lwamakhosi, kodwa kwanqunywa ukuba bayihlehlise kuze kube sekupheleni kweMpi Yezwe Yokuqala.
Maka kweSoviet Union
Primordially umaka obomvu Russian ebuyela eRussia ngo-imfanelo entsha engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye. Sekuvele iwuphawu emzabalazweni amalungelo kwabacindezelwe. Ngo-1876, ngesikhathi iKazan Cathedral Petersburg, rally owawuse, lapho ephakanyiswe umaka obomvu. Ngemva inguquko, kwanqunywa ukuba sivume ifulegi lasendulo Russian, okuyinto kwaba isizinda abomvu. Tricolor liye kusukela baba ezizenza ukunyakaza White.
Ifulege obomvu wamukelwa ngonyaka 1918. Ngemva kweMpi Yezwe II, ngo-1947, ke lathatha isinqumo on ukuthuthukisa republic entsha Union, usebenzisa izimpawu of the State Maka zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Esikhathini RSFSR, ke sivunyiwe ngo-1954.
Ngemva inguquko ka 1917 ifulege Russian wabonakalisa amavolontiya monarchists. Phakathi neMpi Yezwe II lalisetshenziswa kumiswa Russian, owalwa ohlangothini kaHitler. Lena ngokuyinhloko, Roa, futhi amabutho isiRashiya, ACPD, Cossack Stan, Okokuqala Russian National Army.
Ikusasa ifulegi Russian Federation State waqala ukuba Democrats isetshenziswa kusukela 1988.
Yini okufanele ibe ifulege
Yini imibala ifulege Russian kungaba? Izingxoxo ngalolu daba alupheli kuze kube yilolu suku. Abanye abantu bakholelwa ukuthi ifulege St Andrew kube lula ukuba zibe emphakathini. It yadalwa esekelwe amabhanela musketeer. Abanye bakholelwa ukuthi Tsar Alexei Mikhailovich ifulege nge cross sibe munye, nakuba ubufakazi nokuthi likhona kuleli fomu, akukho. abasekeli Okuningi livela ifulegi Romanov lwamakhosi - tricolor black-yellow-omhlophe "isitembu" engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye.
Izimpikiswano ngokuba emhlophe-oluhlaza-obomvu
Abasekeli tricolor bakholelwa ukuthi imibala ifulege Russian lathathwa elingenamikhono izingalo eMoscow, iyona endala kunawo wonke North-Eastern Russia. Lowo mdwebo St George, bayafihleka eluhlaza okwesibhakabhaka, uhlobo raincoat ophuzi, nanto ihhashi elimhlophe enkundleni abomvu. Futhi ubheke wokubusa Alekseya Tishayshego, lapho umkhumbi "Lokhozi" ngaphambilini indwangu emhlophe, blue and red. Nokho, lo mbhalo ukuthi uhlanganyele phezu tricolor umkhumbi, akukho.
Kukhona ubufakazi ongcwele Theophan le Hermit: wababaza ukuthi iRussia Ngeke ufe nje akashintshi izimiso khona, okungukuthi ubu-Orthodox autocracy futhi ubuzwe, nokuthi uzwakalise ezimhlophe, blue and red Russian ifulege. Ake ubone ngeso lengqondo ke elihle ikakhulukazi ngokumelene esibhakabhakeni.
Abasekeli balobu trehtsvetiya yayisemngceleni agumenti ukuthi kwavela nanye ngekhulu leshumi nesithupha phezu amabhanela, imifanekiso kanye nemidwebo amasonto, njengoba kufakazelwa zemihla ngemihla. Isithonjana owaziwa ubukhulu amamitha amane, "Makabongwe zempi yenkosi zezulu," noma "Isonto nenkani", okuyinto Ubuye tricolor igolide.
Nge igolide trehtsvetom ukuhlobanisa yokunqoba amasosha Russian, futhi emhlophe-oluhlaza-obomvu tricolor - omunye ukuhlulwa.
Izimpikiswano ukuze obomvu
Amalungu ifulegi ebomvu ethi kuyinto Russian bomdabu. Ezinye izimo zengqondo ezingakhi ngenxa yokuthi ukuthi sasifanekisela ubukhomanisi ngaphansi kokubusa kweSoviet. Nokho, umlando banner Russian emdala. Futhi, mhlawumbe, elungile nakakhulu ukuthi leli fulegi kuhlotshaniswa okwengeziwe ngomlando Russian kunamanye amafulegi Russian. Russia Sekuyisikhathi eside kubhekwe indlalifa LamaRoma futhi imibuso WaseByzantium. Inhloko-dolobha yaso - eMoscow - obizwa Okwesithathu eRoma. Kodwa elibomvu futhi amaRoma, futhi baseByzantium futhi wasebenzisa. Lokhu umbala elifanekisela ukunqoba, anamandla, ubuqhawe nesibindi abavikeli yezwe labo.
amafulegi Russian (phakathi Empire kanye Russian Federation)
Ukuze uthole umlando esikhulu ngempela futhi eside kwaleli zwe namanye kuye kwashintsha kakhulu izimpawu noma ngokuthula eyayihambisana into entsha. Namuhla abukho incazelo ecacile ukuthi ifulege Russian. Ngakho-ke, wonke umuntu unelungelo lokubumba noma lokuba bathambekele elilodwa noma kwenye ukwelashwa yayo.
Ngakho, kunenkolelo yokuthi umbala omhlophe kusho obuqotho kwamadoda asebukhosini, blue - ukwethembeka, ubuqotho nobumsulwa, futhi ebomvu kufanekisela isibindi, isibindi, ukuphana uthando.
Kungenjalo, aphathe, okusho ukuthi ifulege isiRashiya, kulezo zindawo correlates nge imibala Russian Empire, lapho:
White lifanekisela White Russia;
Blue - Little Russia;
Red - YaseRussia Omkhulu.
Ngisho eMbusweni Russian wayekhona incazelo elandelayo:
umbala omhlophe emelelwa inkululeko;
blue - UnguNina KaNkulunkulu;
obomvu - waba namandla amakhulu.
Abanye imibala ehlotshaniswa iSonto Lobu-Orthodox, iwuphawu emandleni obukhosi futhi abantu Russian; nabanye ngokholo, ngethemba nothando.
Kusukela ngo-1994, izwe lethu igubha uSuku ifulege Russian. Kulokhu semukelwa ngu Isinqumo uMongameli amabili wesibili ka-Agasti. Le nombolo angahambisani obuqhawe eRussia kanye Omkhulu Russian Empire. Ngo-1991, ngesikhathi i-Icebo lika August, e-White House uye ngokusemthethweni wavusa tricolor. Eminyakeni embalwa kamuva ngalolu suku lugujwe Day ifulege Russian.
Tricolor, ehlanganisa imibala white, blue and abomvu e okuhlukile ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi ifulege Masonic. Futhi emigqeni mpo kusho kokuthola umsebenzi imfihlo, futhi ovundlile - passivity. Abaningi bababusi waseRussia abekade zokulala Masonic. Petru naye weza kuleli umphakathi. Uzungu theorists bakholelwa ukuthi Freemasonry ngemuva linemibhikisho civil kanye nezimpi zezwe. ENetherlands, lwalumumethe inguquko yokuqala. Kwalandela France. Futhi Masons wathatha elaseRussia ngomzamo niwunqobe wakhe nentando yakhe.
Ingabe kufanele ngishintshe ifulege
Ngezinye izikhathi ezahlukene, eRussia, e-Russian Empire, iSoviet Union futhi umbono Russian endleleni isimo beshintsha, futhi basakaza phakathi kwabantu, futhi ngezinye izikhathi iphoqelelwe labo noma ezinye amagugu. Ngisho amafulegi Russian zishintshile, kuncike inqubomgomo. Lokho kwashintsha inkolelo abantu isiRashiya, ngokuba amaqaba, wabe eseba abasekeli eqinile Lobu-Orthodox. Kwamakhosi kwathathelwa indawo lamaKhomanisi, nezisebenzi wonke amazwe aye azama ukwenza ulimi ukuxhumana ... Nokho, kungakhathaliseki ukuthi sikuyiphi inkolo nokholo, into ekhona ezingeguquleke, kuyo, futhi ongenakulibaleka. Lona umoya Russian. Amandla akhe samanje futhi namanje abanye, ohlanganisa a nezikhathi ezinzima. zokuphila kwabantu. Ngakho-ke, akunandaba yini umbala ifulege ezweni lethu, futhi lokho kusho ukuthini Mason nezinye izakhiwo efanayo. Uma kuba Russian ke ezijulile Folk ukuhlakanipha, umphefumulo Russian, okuyinto ozimele ulwazi oluningi nokufunda kwezenhlalo, ayinike amandla akhe.
Kuyathakazelisa ekukhanyeni izenzakalo zamuva siye sazibonakalisa e-Inthanethi ifulege Russian. E-US, umthetho phezu semthethweni ukushada kwabantu bobulili obufanayo yamukelwa Juni 2015. Esikhathini lengosi ethile yezokuxhumana Facebook ngemva kwalokho eziningi abantu baqala ukushicilela okuthunyelwe kanye avatar nge-LGBT rainbow ifulege. Ezweni lethu, ekuphenduleni lesi senzo zenzeka kunethiwekhi efanayo, lapho amafulegi Russian wabonakalisa sikhathi, emasisweni futhi umndeni abajwayelekile.
Lapho duty isitembu usumisiwe?
Chtoo Ubuchwepheshe ngokolimi ezinjalo?
Izinzuzo donor zokuhlonipha Russia. Uyithola kanjani i-donor zokuhlonishwa?
Ithemu osenyameni isenzo kusukela irejista. Isicelo Isitifiketi Incorporation
Ingabe ukhulelwe uchithe salengiswa? Kungenzeka yini ukuba uchithe abakhulelwe emva sesivivinyo? Ingabe ilungelo nomlilo uma ukhulelwe salengiswa?
RF uMthethosisekelo, Isigaba 51. Akekho ubophekile ukuba afakaze emelene laye ngokwakhe, umkakhe kanye eziseduze
Indlela ukupheka insipho ekhaya: ubuchwepheshe lula
Dream Ukuhunyushwa: yini iphupho izinwele
Indlela ukugqoka isongo engalweni yakhe?
Izimpawu ingenelisi. Lisho ukuthini-hippie?
Isifo sokulahlekelwa yigazi 1 degree
Ukuze ukhethe laxative ngoba wamathumbu ukuhlanzwa
Kanjani ukwakha "Sims" 3 enhle ekhaya - amathiphu abadlali
Wesifunda German kazwelonke we-Altai Territory: Ukuphatha, emzaneni
Cafe "Ritz" e Voronezh - yezindawo ozithandayo abantu bomuzi!
Kangakanani isitifiketi sokubhaliswa?
Yini okudingekayo ukwazi ukuhlanganiswa kwamakhadi we-tarot